अर्थ Archives - Page 81 of 105 - Sabal Post
१० लाखसम्म चन्दा रकम दिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न उधोगीको सरकार संग माग
काठमाडौं - उद्योगी व्यवसायीहरुले संघसंस्थाहरुलाई १० लाखसम्म चन्दा रकम दिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। सरकारले तयार गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७५ को मस्यौदामा रहेको प्रावधानलाई संशाेधन गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्म चन्दा दिन सक्ने व्यवस्था गर्न संसोधन हालेका
बुटवल, ४ पुस – नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि लागि तोकेको विनिमय दर अनुसार बुधबार रियाल, रिंगिट, दिर्हाम लगायतका विदेशी मुद्राको भाउ घटेको छ । एक साउदी रियालको खरिददर २९ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रिदर ३० रुपैयाँ १३ पैसा रहेको
सुनको भाउ अचमैले घटेपछी ….
बुटवल , ४ पुस – नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको भाउ बुधबार तोलामा ६ सय रुपैयाँले घटेको छ । सुन बुधबार तोलाको ५८ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको महासंघले जनाएको छ । मंगलबार १ सय रुपैयाँ बढेर तोलाको
काठमाण्डौ, पौष ३ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मुल्य घटाएको छ । निगमले पेट्रोलमा २ रुपैयाँ तथा डिजेल र मटितेलमा प्रतिलिटर समान दुई दुई रुपैयाँ मूल्य घटाएको हो । निगमका अनुसार यो मुल्य आज (मंगलाबार) रातिबाट लागू
पुस \_ नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर लगानीकर्तालाई संयमित हुन आग्रह गरेको छ । पुँजी बजार सुधारको माग राख्दै केही शेयर लगानीकर्ताहरु आन्दोलित बनिरहँदा नेपाल धितोपत्र बोर्डले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संयमित हुन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ । लगानीकर्ताहरुले
श्रीकृष्ण सिग्देल \_स्याङ्जा—३ पुष ,स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकामा प्रधान कार्यालय रहेको आँधिखोला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सर्वसाधरणका लागि शेय निष्कासन गर्ने भएको छ । सर्वसाधरणका लागि शेय निष्कासन गर्न एनआईविएल एस क्यापिटल लिमिटेड सगँ सम्झौता गरेको हो । संस्थाले प्रति शेयर १००
भैरहवा, ३ पुस । पेय पदार्थ पारखीहरुलाई लक्षित गर्दै मल्टीनेशनल कम्पनी बिगकोलाले आफ्नो उत्पादन प्रदेश नम्बर ५ मा बिक्रि प्रारम्भ गरेको छ । प्रदेश नम्बर ५ का लागी आधिकारीक बिक्रेता बिजी ट्रेडिङ्गले भैरहवामा एक कार्यक्रम गरि आफ्नो उत्पादन शुरु गरेको
कतारले अमेरिकी उर्जा क्षेत्रमा ५ वर्षमा २० अर्ब डलर खर्चिने !
पुष ३ दोहा- खाडी क्षेत्रका छिमेकीबाट नाकाबन्दी खेपिरहेको इन्धनमा धनी राष्ट्र कतारले आगामी पाँच वर्षमा अमेरिकी उर्जा क्षेत्रमा २० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने बताएको छ। दोहामा भएको दुई दिने लामो 'दोहा फोरम–२०१८' मा बोल्दै उर्जा राज्यमन्त्री तथा ‘कतार
लन्डन — बेलायतको अस्थिर राजनीतिक घटनाक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजारमा पाउन्ड स्टर्लिङमा निकै उतारचढाव भएको छ । पाउन्डको विनिमय दरमा अमेरिकी डलरसँग गत अप्रिलभन्दा ११ दशमलव ७७ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । लन्डनमा गत साताको अन्त्यमा मुद्रा सटही केन्द्रहरूमा एक पाउन्डको
अर्थमन्त्री खतिवडाको राजीनामा माग गर्दै सेयर लगानीकर्ता आमरण अनसनमा
काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राजीनामा माग गर्दै काठमाडौंमा आमरण अनसन सुरु गरेका छन । सेयर बजार सुधार र बिस्तारको माग गर्दै एक साता अघिदेखि रिले अनसन सुरु गरेका उनीहरुको माग सरकारले सुनुवाई नगरेपछि काठमाडौंको भद्रकालीस्थित नेपाल स्टक